Namuhla encane ngeke badonswe kuwe ukalwe Kazan zokudlela ukuthi sincoma ukuvakashela njalo umhlali kulo muzi emangalisayo. Uma usukulungele, siyobe sesiqala!
Kazan futhi kancane ngakho
Kazan kuyinto yesayensi, zamasiko zemidlalo inhlokodolobha Tatarstan. Nomuzi ugcwele esikhumbuzo, iminyuziyamu yeshashalazi, nokuthuthukiswa kwengqalasizinda ezemidlalo. Ngokuvumelanayo ehlanganisa eMpumalanga naseNtshonalanga, nganoma yisiphi isikhathi sonyaka Kazan izivakashi ezivela kuwo wonke amazwe. Ezinye ukuza bajwayelane ifa zomlando zomuzi, edonsa enye ingqalasizinda izivakashi athuthukile, futhi umuntu ofuna ukunambitha edumile Tatar cuisine.
izivakashi abaningi babheka kazwelonke Tatar cuisine lokudla okumnandi kakhulu, elula futhi eqotho. I izitsha inhlanganisela ezingavamile imikhiqizo obanika ikhubalo ekhethekile. Ethandwa kakhulu inyama AmaTatar yemvu kubhekwe, futhi wasebenzisa yenkomo, ihhashi inyama, izinkukhu inyama. It usesikhundleni esikhethekile endaweni isobho nokusanhlamvu, imikhiqizo yobisi, imikhiqizo nezitini inhlama.
Kazan ekhishini, kulethe amasiko Culinary AmaTatar, isiRashiya, baseBulgaria, kuhlanganisa ezihlukahlukene izitsha nsuku zonke futhi iholide amatafula. EKazan, ungathola yokudlela ukuze ivumelane zonke ukunambitheka kanye amazinga okuphila. Futhi manje sikulethela isilinganiso esincane Kazan zokudla!
Isakhiwo e Kazan emgwaqeni. N. Nazarbayev, 35/98, evulekile kusuka 12:00 kuya 24:00. Yokudlela oda ukukhokhelwa by amakhadi epulasitiki.
Vakashela "Sultanate" (Kazan) - yokudlela, lapho uqiniseka ukujabulela, futhi ngeke uzithole ingaphakathi zikanokusho elinendawo uzokwazi ukunambitha izitsha ka isiTatar cuisine Oriental. Kukhona eliqatjhiweko enkulukazi ephethe namandla abantu abangaphezu kuka-100, igumbi Karaoke, ibha nokunye okuningi.
Imibala amakamelo kwenziwa amathoni ensundu obomvu emaqaqasini inqwaba izingoma izimbali, ukukhanyisa ezithambile ikhuthaza ukuphumula.
I professional ithimba labapheki ukulungiselela ngawe okumnandi bendabuko Oriental pilaf zuri belish, Khashlama e Hanski. Uma kudingekile, ungasebenzisa iIgama inkonzo nokuhleleka kwezidingo ukudla okuphekwe ekhaya ukupheka nabo endaweni eyihlane, ukukhonza futhi isevisi kusukela iqembu yokudlela. "Sultanate" (Kazan) - yokudlela eziyothokozisa wonke umuntu!
Uma ufuna uzithola imvelo kazwelonke waleli dolobhana ke vakashela teahouse futhi yokudlela "Old eBukhara", esemgwaqweni e Kazan ngakwesokudla-Bulachnaya emgwaqweni.
SOFAS Kalula nge ezihlalweni anombala, amatshe kanokusho endlini, sebuningini nendwangu kazwelonke ukudala isimo umsungulo, ukusondelana nenduduzo. Le restaurant kuyinto amakamelo ambalwa, kukhona hookah egumbini lokuhlala kanye non-ukubhema Igumbi. Callao inikeza Ukukhetha eziningi tobaccos elimnandi. Ukusungulwa Kuyathokozisa efanelekayo lobusuku romantic, futhi amadili ezinomsindo.
Sikhumbuza wena ukuthi lesi silinganiso Kazan zokudlela ihlanganiswe asekelwe lobuya izivakashi ababesele ku-intanethi.
Egqamile ingaphakathi Zama kazylyk umkhiqizo, noma ukunconywa beshbarmak ashisayo Lagman, nambitha amadombolo noma risotto. Ukuze izinkampani ezinkulu, ungakhetha izitsha ezikhethekile, ezifana kulolo ketshezi isidumbu iwundlu, carp eyayigcwele noma umlenze wewundlu.
I-baklava sha itiye elimnandi kuyoba kube sesilinganisweni esiphelele uyakufanelekela ukudla kwakho. Izindleko ukudla yokudlela libhekisela sokwenyusa amanani isigaba, kodwa izingxenye zinkulu ngokwanele. Ngemuva kokuvakashela le ndawo kanye, ngokuqinisekile buya lapha futhi!
"Violet" - yokudlela (Kazan), okuyinto ungathola emgwaqeni Spartakovskaya. Phakathi nezinsuku ke iyavulwa kuze kube phakathi kwamabili, ngoLwesihlanu futhi ngezimpelasonto - kuze 3am. Esikhathini yokudlela ungathola induduzo nokuthula Lounge-igumbi amadokodo ngabanye, ukuze ukuhuba izingoma ngesi-karaoke, noma ngabe ukujabulela idili elikhulu kubantu 150 ehholo main.
Okugqamile, elikhanyayo, owayephila futhi engavamile design Karaoke yokudlela "Violet", a emikhulu yaseYurophu, Tatar cuisine, ngemisebenzi emihle babeyigugu adunyiswe kokubili bendawo nezivakashi. Izivakashi inikeza uhlelo fun ukuzijabulisa ukusebenza bukhoma abaculi bendawo.
Imenyu yokudlela inikeza inkululeko ebanzi ekukhetheni izitsha. Kubathandi Japanese cuisine okuphekiwe imiqulu, abalandeli of the Tatar chef ukwenza ihhashi inyama phezu kwamathambo isobho nge iwundlu Shurpa, imisebe Manta, "UKhozi myc" nokunye okuningi.
Lapha uzothola imenyu inyama kanye izitsha zokudla kanye nama-dessert elimnandi, lezinkwa, imenyu yezingane. Phakathi nezinsuku ntambama ungakwazi ukujabulela kwasemini ibhizinisi. Ukuze izivakashi ongakasetshenzwa yokupaka.
Eqinisweni, "Violet" - yokudlela (Kazan), lapho sincoma ukuvakashela umhlali ngamunye.
izikhungo Inethiwekhi "Bilyar" idume high izitsha kazwelonke Tatar cuisine, lokubhalela bendabuko kanye amanani ezingabizi. Yokudlela lihlotshiswe ku isitayela indlu Tatar, ifenisha wenziwe ngokhuni kanye Indwangu. On the izindonga ungabona ekhishini izitsha ezindala, rocker, isiTatar efekethisiwe.
imenyu yokudlela sika inikeza kuphela esiphundu kunazo izitsha ihhashi inyama, yemvu, amakhekhe namakhekhe amnandi. Phakathi nezinsuku uzilungiselele ukudla kwasemini ukuthi ukunikela inkonzo ukulethwa kuphi emzini ngaphansi kwehora.
I zokudlela ngokuvamile aminyene, kodwa izisebenzi unake ngeke kukwenze ayilinde isikhathi eside i-oda. Lapha ungakwazi angachithi idili noma zalungisa ukudla okwakuzodliwa amaqembu izivakashi.
Kulezi zokudlela Kazan, uhlu okuyinto okwethulwa kulesi sihloko, amakhulukhulu abantu abasuka kuwo wonke lokuphuza sokudla okwehla esiphundu kazwelonke lapha.
Yokudlela "Shelter Bach" itholakala maphakathi Kazan, esakhiweni enomlando ezithakazelisayo. Ingaphakathi UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki wenza ngemibala egqamile futhi ukhumbuza efulethini ephilayo nge yokugezela nekhishi. Lapha, ukuzijabulisa ongakunika ukudlala imidlalo board, ukufunda izincwadi, izingane zikhona izihlalo okusezingeni eliphezulu futhi zasehhovisi zokuphetha.
Cuisine European kwimenyu. Kanye izitsha bendabuko inyama Kazan, kukhona kwasolwandle izitsha kanye nenhlanzi. Inkosi prawn ne utamatisi sauce, filet mignon, scallop ewayinini sauce, ulwandle bass, spaghetti ne kwasolwandle, yokubeka wewundlu nge Sesame yengulube nati omnyama - lena kuphela ingxenye encane okujabulisa ukudla yokudlela. Ukuze izivakashi omncane engenathi kukhona imenyu enezingane ezinezidingo ezikhethekile sika. Ngaphezu izitsha ahlinzekwa iwayini enkulu uhlu, ugwayi, nethuba abheme hookah.
Kuhle Kazan zokudla, okwethulwa kulesi sihloko, ubophekile ukuba uvakashele zonke owokudabuka.
By the way, cafe "Shelter Bach" sekuneminyaka kuka-10 eminyakeni futhi namanje bemthanda izakhamizi Kazan bese izivakashi, abakwazisayo izinga njalo eliphezulu ukudla service.
Sithemba ukuthi lokhu zokudlela simo Kazan Ukukusiza ukukhetha indawo lapho uzochitha Ngobusuku obuthule nabantu obathandayo.
Sitolo sekudla lokuphekiwe Magnitogorsk: incazelo
Indawo yokudlela "waseZulwini Castle" (Vladivostok): indiza kwenjabulo
Sitolo sekudla lokuphekiwe Elista: ukubuyekeza the best
Indlela ukupheka khinkali kanjani ukupheka, yini ukuhambisa
Calamus impande. Izakhiwo kanye Izicelo
Stomatitis Aphthous: ukwelashwa kanye nokuvimbela
Amakilasi Wezingane, sithakazelise futhi